Brackish rafitra fikarakarana ny rano (HMJBKRO andian-dahatsoratra) - China Xi'an Homey Teknolojia
Brackish rafitra fikarakarana ny rano (HMJBKRO andian-dahatsoratra)
fandavana sira avo brackish mifanohitra rafitra osmosis 3000GPD tarika ity dia ampiasaina mba hitsaboana brackish rano TDS ny 7000ppm amin'ny sitrana upto 70% ny tahan'ny. Ny tena conponents ny rafitra no haino aman-jery maro sivana, ampiharina karbaona sivana sy ny rano brackish desalination unit.With sira avo sy iva fandavana angovo sonsume, dia mora ihany koa ny fametrahana sy ny fikojakojana. Ny vokatra dia voamarina tamin'ny taona amin'ny kalitao tsara. Brief Fampidirana: 1, Ampiasao Dow FILMETEC rindrambaiko famolavolana ny kajy sy simulate, ...
Type: Brackish rafitra fikarakarana ny rano
Raw rano TDS: ambany 15000ppm
Output rano TDS: latsaky ny 600ppm
Frame: Carbon vy
fandavana sira avo brackish mifanohitra rafitra osmosis 3000GPD
Io tarika dia ampiasaina mba hitsaboana brackish rano TDS ny 7000ppm amin'ny sitrana upto 70% ny tahan'ny. Ny tena conponents ny rafitra no haino aman-jery maro sivana, ampiharina karbaona sivana sy ny rano brackish desalination unit.With sira avo sy iva fandavana angovo sonsume, dia mora ihany koa ny fametrahana sy ny fikojakojana. Ny vokatra dia voamarina tamin'ny taona amin'ny kalitao tsara.
1, Ampiasao Dow FILMETEC rindrambaiko famolavolana ny kajy sy simulate, nanome ny teoria guidline ho an'ny famolavolana
2, famolavolana rafitra samy hafa araka ny hiandry ny kalitaon'ny rano sy ny fahaiza-manao ilaina, ny andian-dahatsoratra B2K dia ampiharina ny manta rano sira votoaty 5000ppm-15000ppm. Raha afa-po sira dia ambonin'ny pls 15000ppm hifidy SW andian-dahatsoratra ho an'ny ranomasina
3, Unique mandeha ho azy ny rano madio fanoloana fitaovana hanoloana hifantoka amin'ny hoditra manify amin'ny rano madio, rehefa mijanona ny hampihenana ny rafitra manify fandotoana, noho izany maro ny fanompoana ny fiainana sy ny vola lany ambany.
4, Carbon sy Stainless vy mifono vy toe for safidy, mihetsiketsika kodiarana azo nametraka ho an'ny toe-javatra isan-karazany fametrahana
5, Stainless vy sy SCH80UPVC fantsona manara-penitra mba hahazoana antoka tsy leakage sy iva harafesiny eo ambany fanerena ambony
Power famatsiana dia 220 / 380V, 50Hz / 60Hz ho an'ny tsy voatery. Ny toe no karbaona Stainless vy sy ny vy tsy voatery.
HMJBK9RO seires- mba hitsaboana ny manta rano ny TDS latsaky ny 9000ppm
HMJBK15RO seires- mba hitsaboana ny manta rano ny TDS latsaky ny 15000ppm
1.DOW manify 2.FRP tsindry sambo 3.sediment sivana 4.SS centrifugal presure avo paompy
6. rafitra 5.cleaning rano madio fanoloana rafitra 7. carbone vy mifono endriny
8.PLC mandeha ho azy fanaraha-maso
tsy voatery singa
1.multi-media sivana 2.activated carbone sivana 3.stainless rafitra vy
Previous: Standard RO rafitra fikarakarana ny rano (HMJRO-6000LPH)